Gọọmenti Anambra Amàlite Ịnwụchikọ Ndị Ji Ụmụaka Arịọ Arịrịọ
Ya bụ nnapụta bụ nke kọmishọna ahụ mere dịka ọ bagidere njem ngagharị n'ụfọdụ ebe dị iche iche ndị ahụ na-arịọ arịrịọ, bụ nke o sitere na ya wee chọpụta na ọtụtụ ụmụaka ahụ ụfọdụ ndị mmadụ ji arịọ arịrịọ abụghị ndị ahụ mụrụ ha n'afọ ha, ebe ụfọdụ ndị ahụ na-eme na ha kpùrù isi bụcha ndị na-ahụ ụzọ na ndị ahụ zùrù òkè n'ezie.
Dịka akụkọ siri kọọ, ụfọdụ ụmụaka ahụ e ji arịọ arịrịọ ahụ bụ ndị a chọpụtara na ha apụghị ịkọwatawu ebe ndị bụ nne na nna ha n'ezie nọ, ma bụrụkwa ndị e kwùrù na a na-egoro ha n'ọnụ otu puku Naịra kwà ụbọchị (site na aka ndị abụghị nne na nna ha) maka iji ha ga rịọ arịrịọ n'ebe dịgasị iche iche.
Kọmishọna Mezue gbarụrụ ihu bànyere ajọ ọnọdụ ahụ ma kọwaa ya dịka akparamagwa jọgburu onwe ya nakwa ihe megidere ikike dịịrị mmadụ. Ọ sị na nke ahụ adabaghị adaba na mbọ ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ na-agba iji hụ na nwa afọ ọbụla na steeti ahụ nwetara ezi ọnọdụ obibi ndụ. Ọ kpọkùzịkwara ndị ọzọ na-eme ihe dị òtù ahụ ka ha sepu aka na ya maka na onye ọbụla a ga-enweta na ya ga-abụ onye ga-eji anya ya abụọ wee hụ ntị ya na-ejighị ènyò.
Otu ọ dị ugbu a, a napụtala ụmụaka ruru iri abụọ n'ọnụ ọgụgụ site na ya bụ ngagharị, ebe ndị ahụ jigasị ha arịọ arịrịọ bụkwa ndị a nwụchikọgoro.